Buy လောက်လောက် BSF နှင့်စျေးကွက် Method ကို• Yuri BSF ရောင်း
ဝယ်လောက် BSF & ဘယ်လိုအဆိုပါစျေးကွက်ရောင်းချ
လောက်လောက် BSF နှင့်စျေးကွက် Method ကိုရောင်းဝယ်ပါ - အင်ဒိုနီးရှားအချို့အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်လောင်းသို့မဟုတ်ပိုးနေသောရောင်းချနေလုပ်ငန်းသို့မဟုတ် Buy လောက်လောက် BSF BSF နေဆဲတစ်ခုပုံမှန်မဟုတ်သောအရာဖြစ်၏။ ပြည်ပမှာရှိနေစဉ်, ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကတည်းကအပြေးလျက်ရှိသည်။ ဒါက purchasing အရည်အသွေးကိုအမြိုးအနှယျမျိုးဆက်များလောက် BSF လောက် BSF ဝယ်ယူရှေ့တော်၌ထိုစစ်ဆေးမှုများနှင့် re-စစ်ဆေးမှုများပြုပါဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းအခါကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အကျွမ်းတဝင်များနှင့်အနံ့မရှိဘဲခေတ်သစ် bsf လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမသိသူတို့အဘို့, ၎င်းတို့၏စိတ်ထဲတွင်ဆဲ, slovenly ညစ်ပတ်နဲ့အနံ့ပုံရသည်။ ရောဂါ၏အရင်းအမြစ်သယ်ဆောင်ကြောင်းအစိမ်းရောင်ယင်ကောင်ရာပေါင်းများစွာ၏ဆိုက်ရောက်ဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
ထို့ကြောင့်သင်၏အခြံပေါ်ရှိပါတယ်မှသာအနက်ရောင်ယင်ကောင်သို့မဟုတ် bsf နိုင်အောင်, မှန်ကန်သောလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးသင်ယူဖို့, မိမိလိုအပ်ပါဘူး။ အဆိုပါရလဒ်အနံ့နှင့်စူပါစျေးပေါကုန်ကျစရိတ်, သန့်ရှင်းမဟုတ်ပါဘူး။
နာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒါအပေါ် forage ငါး, ငှက်, တွားသွားသတ္တဝါ, ဆေးပညာအဘို့, ရဲနှင့်အမျှအကျိုးခံစားခွင့်၏များပြားလှရှိပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလောက်သင်အလွန်ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ရရှိရန်အလားအလာ running အကြောင်းကိုအလေးအနက်လျှင်တစ်ဦးနယ်ပယ်စျေးကွက်အတွက်တိရိစ္ဆာန်သာ, ထိုကိန်းဂဏန်းသည်အလွန်စိတ်ကူးသည်အတိုင်း, တစ်ဦးတည်းအမြင်အင်ဒိုနီးရှား၌တည်နှစ်ဆယ်အမျိုးသားရေးစကေးမွေးမြူရေးအစာကျွေးကုမ္ပဏီလွှဲဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်မျိုးစေ့, စျေးကွက်, အစာကျွေးခြင်းအမျိုးအစား, kulture မီဒီယာများ၏စျေးနှုန်းပါဝင်ရမည်, ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအရေးအပါဆုံးအရာအနံ့ဖြစ်ရန်နှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအမြတ်ဝင်ငွေ, အသုံးပြုတဲ့မီဒီယာအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်, ခြေးသို့မဟုတ်မိလ္လာကနေဖြစ်သင့်ဘူး။
အဘယ်ကြောင့်အနံ့မရှိဘဲလယ်ယာပိုးရမလဲ? အနံ့ bluebottle ဖိတ်ခေါ်မယ်လို့နှင့်ခလုတ်မိသားစုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းကများလည်းထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်လျှင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင့်လုပ်ငန်းကိုအစဉ်အမြဲဆက်လက်နိုငျသောကွောငျ့ကို Safe သက်သာမိသားစုအဲဒီမှာကတော့အောင်မြင်မှုမရသေးပါလိမ့်မည်ကြောင့်အနံ့မရှိဘဲကင်းလွတ်၏စိုက်ပျိုးမှုများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, သင် SAFE သက်သာစေသည်။
ဒါကြောင့်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အစအဘို့ကပထမဦးစွာကြားပေါက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလောက်အဖြစ်ပြုသောအမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အသေးစားစိုက်ပျိုးမှုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ pegembangannya အဘို့အနောက်မှလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ အတွက်သွားကြဖို့ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလောက်.
ဒီစိုက်ပျိုးမြေများအတွက်ပစ္စည်းအိမ်တွင်ရရှိနိုင်ကျန်ပါဝင်ပစ္စည်းများအသုံးပွုနိုငျအဖြစ်မြို့တော်အတော်လေးသေးငယ်လောက်ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများသို့မဟုတ် kulture များအတွက်မီဒီယာကုန်ကျစရိတ်လည်းအလွန်စျေးပေါသို့မဟုတ်နီးပါးအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်စျေးပေါနီးပါးအခမဲ့ပါသလဲ အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်, ခြေးနှင့်မိလ္လာကို အသုံးပြု. ၎င်း၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၌ကျယ်ပြန့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမူကား,
အရည်အသွေးပေါ် မူတည်. ဝယ်ယူနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ရည်ရွယ်ချက်မညျနညျး Rp5.000 အကြားကြက်အပါအဝင်တိရစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်းသို့မဟုတ်ငါးငါးခူ lainnnya အဘို့အလိုလျှင် - Rp9.000 / ကီလိုဂရမ်။
Rp10.000 အကြားအစေ့အဘို့အဖြစ် - Rp500.000 / ကီလိုဂရမ်, အရည်အသွေးပေါ် မူတည်. ။ ခြားနားချက်စောင့်ရှောက်မှု၏ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးမျိုးစပါးပြောပြရန်ကဘယ်လို လာ. ထိုသူတို့အားပြုမူဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုကိုယ်တွေ့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
သို့မဟုတ်အမျိုးအနွယ်ကိုကုသမှု ပတ်သက်. ရောင်းချသူကိုတောင်း။ ကုသမှုသာပုံစံပေးထားလျှင်အရည်အသွေးအတူတူပင်အမှိုက်သရိုက်များမဟုတ်ပါ။ ဤကဲ့သို့သောအရည်အသွေးငါးနှင့်ကြက်စာကျွေးခြင်းအဘို့အကောင်းလှ၏။ အမြိုးအနှယျအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
စျေးနှုန်းအရည်အသွေးပိုကောင်းပိုစျေးကြီး, များသောအားဖြင့်အရည်အသွေးတိုက်ရိုက်အချိုးကျသည်။ ဒါပေမယ့်လည်းသူမျိုးဆက်များထွက်များစစ်ဆေး!
ဘယ်လိုစျေးကွက် Magot BSF
သင်ဤလုပ်ငန်းကိုစတင်ရန်များအတွက်ဒါဟာနောက်ပိုင်းမှာလောင်းသူတို့ရဲ့ကောက်ပဲသီးနှံများကိုစျေးကွက်မည်သို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာသင်ယူရန်, အရေးကြီးပါသည်။ သင်အမှန်တကယ် max ကိုစတင်ရန်အခါဒါ။
BSF လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးအထွက်နှုန်းအောက်ပါနည်းလမ်းတွေထဲမှာစျေးကွက်နိုင်ပါတယ်: * တိုက်ရိုက်ငါးလယ်သမားများ, ကြက်မွေးမြူ, တွားသွားသတ္တဝါများနှင့်ဝါသနာလာပါ။ သင်တို့အဘို့တစ်ခုမှာထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုတိုက်ရိုက်သွားပါနှင့်ချက်ချင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်လယ်သမားများအားပူဇော်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး။
ဥပမာ: အလောက်ကျနော်တို့များကိုကျွေးမွေးစဉ်အခါ, ငါးကိုစောင့်ရှောက်ရန်မြေနှင့်အတွေ့အကြုံကိုပိုင်ဆိုင်လယ်သမားများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုယူပါ။ ဒါဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်အက္ခရာစာဖြင့်ရေးသားသဘောတူညီချက်လုပ်ရပါမည်။
ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမမျိုးဆက်များငါးခူသို့မဟုတ်ကြက်သားလယ်သမားအဘယျသို့ရှိသင့်ပတ်လည်လျှင်? ထိုအရပ်၌အနီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သော Facebook, Instagram, twiter, linkedin, youtube ကအဖြစ်ဆိုရှယ်မီဒီယာ tools တွေကိုသုံးပြီးစျေးကွက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခမဲ့ website ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးမျိုးသောလူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်စဉ်ဆက်မပြတ် post ကို Perform, ငါးများနှင့်ကြက်မွေးမြူရေးနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးသားအုပ်စုပဲ့တင်သံမမေ့မလြော့ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ကို အသုံးပြု. ထက်ပိုကောင်းသည်အခြား Facebook ပေါ်မှာအကောင့်တစ်ခုစာမျက်နှာသို့မဟုတ်စာမျက်နှာများဖန်တီးပါ။
ကျနော်တို့ကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုမြှင့်တင်ရန် twitter လူမှုရေးမီဒီယာအသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်, twitter များမှတဆင့်ရောင်းချခြင်းအပေါ်ပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံး gratisannya က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုပွငျဆငျသငျ့သညျ။ ကျနော်တို့နေသူများကဖန်တီးသောဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ဝေစုမှာ New post ပြီးသားလည်းမရှိပါ။
ဒီတစ်ခုအရေးပေါ် Med ကျော်ကြား closingnya အဆငျ့မှာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း instagram ပိုပြီးဆောင်ရှိနေစဉ်ကပိုကလူ, လူမှုရေးအပြန်အလှန်များအတွက် tool အဖြစ် facebook ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ဖြစ်ကောင်းသောကွောငျ့, facebook အကောင့်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အတော်လေးမြင့်မားသည်။
ဤနည်းပင်နည်းနည်း "ရှုပ်ထွေး" ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှု, ဒါပေမယ့်ရေရှည်ရလဒ်လျှင်အလွန်ကောင်းလှ၏, ဒါပေမယ့်သူကကျနော်တို့ကို run သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလားအလာဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျကံကောင်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်, မီဒီယာက်ဘ်ဆိုက်ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကများသောအားဖြင့်အမြောက်အမြားအတွက်အမိန့်များနှင့်စျေးနှုန်းဒေသခံစျေးကွက်ထက်လည်းပိုကောင်းနိုင်၏, ပြည်ပမှာအနေဖြင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
website တစ်ခု Creating သင်သည်ထိုကဲ့သို့သော Blogspot အဖြစ် Google ၏အဆောက်အဦ, သုံးမှာ google 100% နှစ်ဦးစလုံးအခမဲ့ငါ၏အစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်လျှင်ပင်ယခုအလွန်လွယ်ကူပြီးစျေးပေါဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့မြှင့်တင်ရေး၏ဥပမာများအတွက် Blogspot မှာ google
မျှမျှတတကြီးမားကျယ်ပြစျေးနှုန်းအများဆုံးစျေးပေါတစ်ဦးထံမှအွန်လိုင်းစတိုးဖန်တီးပူဇော်ကြောင်းဤမျှလောက်များစွာသောန်ဆောင်မှုရှိပါတယ်။ သင်ရုံသင်ရှိသည်ဘတ်ဂျက်အရသိရသည်ရွေးချယ်ပါ။ google အမျိုးအစားထဲမှာလှည့်ကွက် "န်ဆောင်မှုတစ်ခုအွန်လိုင်းစတိုးဖန်တီးဖို့"
ဂရုတစိုက်ထိုသူအချို့တို့သည်ကောင်းသောအချို့ကိုလည်းသတိထားပါရန်ရှိသည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ နှေးကွေးနှင့်များစွာသောသူတို့ကိုမမေး, သငျသညျအဘယျသို့ခြေလှမ်းများကိုပွငျဆငျသငျ့သညျအကြံဉာဏ်တောင်းခံပါ။ သူတို့သည်ငါတို့အဘို့အလုပ်မလုပ်လိမ့်မည်ဟုအွန်လိုင်းစတိုးများအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ကိုပေးစေခြင်းငှါမတတျနိုငျသောဝန်ဆောင်မှုကို select မထားပါနဲ့။
သငျသညျ OLX, Tokopedia နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့အဆိုဒ်များ၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင်တန်းဝန်ဆောင်မှုလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးဖွင့်လှစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောစီးပွားရေးကိုပိုးများအတွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့ရဲ့မဟာဗျူဟာကိုလည်းဖန်တီးမှုနှင့်ထူးခြားသောသူဖြစ်ရမည်, ပွင့်လင်းလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးလေ့ကျင့်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ခုဖြစ်သည်တဦးတည်းသော, ဒီမဟာဗျူဟာအရေးကြီးသောသည်အဘယ်ကြောင့် ???
တခြားသူတွေကိုအသုံးဝင်သော။ သူတို့ပြီးသားဖြစ်ကြပါလျှင်သင်တန်းသားတစ်ဦးလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးကို run ချင်မှဆက်လက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပင်သင်တန်းသားသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်နေ့နေ့မှာဖြစ်လိမ့်မည်။ စီးပွားရေးအလားအလာကြီးထွားလာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကန့်သတ်ထောက်ပံ့ရေးစဉ်းစားနေတုန်းပဲအလွန်ကြီးမားသည်။
လူမှုရေးမှသာစတင်ပေမယ့်အနာဂတ်မှာတကယ် supporting သို့မဟုတ်ငါးသားဖောက်လောက်၏လယ်ပြင်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလေ့ကျင့်ရေး / စေ့ဆော်မှုဖြစ်လာပါလိမ့်မည်ပေမည်။ အတွက်လေ့ကျင့်ရေးအားထုတ်မှု
သင့်ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ပုံမှန်ထက်အဖြစ်အဆင်သင့်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများကြောင့်လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး၏လေ့ကျင့်ရေးဖွင့်လှစ်, မည်သည့်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်ရုံကိုဘယ်လိုမှန်ကန်သောလမ်းနှင့်ခြေလှမ်းများကိုရှင်းပြ, စမှအဆုံးအဘယ်သို့ပြုရပါမည်။
အနိုင်ရတဲ့အမျိုးအနွယ် & ကျန်းမာရေး BSF လောက် Choose လုပ်နည်း။ သငျသညျ kembangbiakan သို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးဘို့အမြိုးအနှယျလောက် select လုပ်သောအခါ, သာလွန်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာသောမျိုးစေ့ကိုရှေးခယျြသငျ့သညျ။
သာလွန်သောမျိုးစေ့ကိုလောင်း / လောက် BSF အများအပြားနှင့်ကျန်းမာများမှာထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ်ပါယျရညျအသှေးအားဖြင့်မျိုးစပါးမြင့်မားသောစီးပွားရေးတန်ဖိုးနှင့်မျှရောဂါရှိသကဲ့သို့၎င်း၏မိဘများ၏စစ်မှန်သောသဘာဝကိုသရုပ်ပြနှင့်မြင့်မားသောအာဟာရအကြောင်းအရာရှိသည်ဖို့တတ်နိုင်ကြောင်းကိုသာလွန်တဲ့သတ္တိလည်းရှိတယ်သောအနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင်မျိုးစေ့ဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာဂရုမစိုက်ဖို့ဘယ်လိုမေးဖို့ pemternak တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်နှင့် BSF များအတွက်မျိုးစပါးဖြစ်လာဖို့ကလေးဘဝကုသမှုစဉ်အတွင်းအစေ့မှထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအစားအစာအဘယ်အရာကိုမျိုးကို။
အခြားတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့တူသောလောက် BSF ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလအတွင်းလုံလောက်သောအာဟာရကိုရသင့်တယ်။ bsf မိတ်လိုက်နှင့်တင်သောကြက်ဥလှုံ့ဆော်ဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းမီဒီယာပြင်ဆင်မှု၏ nutrigot အစပိုင်းထည့်ပါ။
အားသာချက်များကို Bibit Unggul
BSF လျင်မြန်စွာအရွယ်ရောက်ပြီးသူ / ပျံသန်း BSF သို့ Hatch
sd 500 900 အကြားမြင့်မားတဲ့ BSF ကြက်ဥအရည်အသွေးကိုအဆင့်ကိုတဦးတည်းကြက်ဥနှုန်းလောက် tailed
BSF ပျိုးပင်ပု BSF အမျိုးအနွယ်ကိုရရှိစေရန်လျှင်အထက်အဖြစ်သာလွန်ဂုဏ်သတ္တိများဗီဇထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။
မျိုးစပါးနှစ်တွင်တစ်လျှောက်လုံးတဖြည်းဖြည်းတစ်ဦးထက်သာလွန် BSF လောင်း / လောက်ထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဝယ်ယူသည့်အခါတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူအဓိကသူတွေကိုယေဘုယျနေ့စဉ်သာ 18 30 ရက်ပေါင်းပိုမြန်စပါးရိတ်ရာကာလများမှာ
အရည်အသွေးမျိုးစပါးအသစ်ပင်အသက်တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အထိပေါက်နှင့်အထက်, အလွယ်တကူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနိမ့်အမြိုးအနှယျသေဆုံးမှုနှုန်း, လျင်မြန်စွာတိုးတက်မှုနှင့်စိုက်ပျိုးမှု၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုမှတုံ့ပြန်မှုများရရှိစေရန်အထူးသဖြင့်အခါ, တွင်လည်းအစွန်းရောက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။
နိမ့်ဆုံးအထက်တွင်စာရင်းထဲက 85% ထက်သာလွန်ဂုဏ်သတ္တိများတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလျှင်, အနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင်များ၏အစေ့တစ်ဦးထက်သာလွန်မျိုးစိတ်အဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။ 85% အထက်ပါလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းကြဘူးသောအခါ, ထို့နောက် BSF ပျိုးပင်သာမန်အဖြစ်ခွဲခြား။
အရည်အသွေးမျိုးစပါး: ကြီးတွေကြီးတွေယူနီဖောင်း 2cm